“Liverpool waxay leedahay taariikh wanaagsan… laakin” – Rodri – Gool FM
“Liverpool waxay leedahay taariikh wanaagsan… laakin” – Rodri
(Manchester) 10 Maajo 2022. Xiddiga kooxda Manchester City ee Rodri ayaa ka hadlay hadalki xiisaha badnaa ee macalinkiisa Pep Guardiola ee ku saabsana kooxda ku tartamayaan hanashada horyaalka Premier League ee Liverpool.
Pep Guardiola ayaa si dadban u weeraray naadiga ay ku xafiiltamayaan hanashada horyaalka Premier League, wuxuuna sheegay in Liverpool ay taariikh cajiib ah ku leedahay tartammada Yurub, laakiin taariikhdooda horyaalka Premier League aysan ahayn mid xoogan.
Haddaba sida uu daabacay wargeyska Mirror ee dalka England, xiddiga khadka dhexe kooxda Manchester City ee Rodri, ayaa sheegay:
“Ujeedkeena waa inaan taariikhda u bedelno kooxda Manchester City.”
“Liverpool waxay leedahay taariikh naga fiican, tani waa wax iska caadi ah, dabcan Liverpool waa mid ka mid ah labada ama seddexda kooxood ee ugu fiican dalkaan taariikhda.”
“Waxaan halkaan u joognaa inaan bedelno taariikhda, waxaana halkaan u joognaa inaan qeyb ka noqono waayaha casriga ah ee Premier League, iyo inaan maalin uun noqono kuwa la mid ah Liverpool.”
Si kastaba ha noqotee, kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa waxay xilli ciyaareedkan si xoogan ugu dagaalamayaan hanashada horyaalka Premier League, iyadoo City ay hadda ku jirto kaalinta koowaad waxay leedahay 86 dhibcood, 3 dhibcood nadiif ah ay ka sarreysaa Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta, xilli 3 kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin dhamaadka horyaalka ee xilli ciyaareedkan.
“Klopp wuxuu tababare u yahay kooxdii ugu fiicnayd taariikhda Liverpool” – Steven Gerrard
Milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea oo xiiseynaya saxiixa Harry Maguire